China Dongshen matihanina fisaka tampon-tampon'ny volo vita amin'ny makiazy mpanamboatra mpanamboatra sy mpamatsy | Dongmei
Dongshen matihanina fisaka tampon-tampon'ny volo vita amin'ny taovolo
Borosy Flat Top Foundation - Ampiasao vokatra tsy misy tsiranoka sy tsiranoka na vovoka na vovoka na vovoka.
FANOMEZANA T / T, Paypal, Western, sns.
● Dongshen Foundation Brush: Ity no borosy fototra tsara indrindra izay malefaka indrindra hikasika sy hametaka fototra amin'ny tavanao, mora amin'ny hoditra, tsy mandray sy mandany vokatra ary mampihatra tsara ny fototra.
● Boribory matevina, mafy orina ary malefaka: Ity borosy Flat Kabuki Foundation ity dia vita amin'ny volon-doha sentetika, marefo somary marefo nefa mafy orina, mandrakotra mora foana ny kilema madinidinika, teboka ary ny mony miaraka amin'ny ankamaroan'ny karazana fototra rakotra feno.
● Fampiharana marobe: Ny borosy dia tsy mamela dian-kapoka. Makiazy tsy misy kilema tsara ho an'ny vovoka, ranon-javatra, fanafenana, fanosotra, lokony, fanafenana, tarehy fanosotra. fototra kely fotsiny amin'ny borosy no ilaina amin'ny valiny tsara indrindra, fampiasanaDongshen borosy hamoronana fandrakofana voajanahary sy tsy misy fotony.
● Famolavolana sy fitaovana matihanina: tsy misy habibiana 100% ary tsy andrana amin'ny biby daholo Dongshen borosy makiazy miatrika dingana 80 mandritra ny fanamboarana mba hisorohana ny fandatsahana azy, ny fitaovantsika dia manome fahatsapana hafakely sy mirentirenty.
● Antoka avo lenta: makiazy tonga lafatra miaraka amin'ny Dongshen fototra borosy, ary serivisy fanampiana lehibe, antoka 100% vola azo antoka raha manana fanontaniana ianao. Andriamanitray ny mpanjifa, tianay ny maka ny tsara indrindra ho anay rehetra.
● Volo sentetika voajanahary: Svolo matetika sy marefo, volom-borona matevina. Smpihavana sy malefaka, na dia makiazy aza. No marika borosy, tsy misy vovoka. Ny akora dia nafarana avy amin'ny marika BASF any Alemana.
Fikolokoloana mahazatra - Aorian'ny fanadiovana dia tsindrio moramora amin'ny volon'osy na lamba landy ny volon'ondry mba hanesorana haingana ny hamandoana ary ahantona ny borosy makiazy hamela azy ho maina voajanahary. Aza adino ny manodinkodina volom-bolo na mampiasa fanamainana volo (rivotra mafana) hampamaina ny borosy makiazy.
Amin'ny maha mpamatsy anao atokisana anay dia manome vokatra sy kalitaon'ny serivisy 100% foana izahay. Raha tsy faly ianao momba ny vokatra azonao tao anatin'ny 30 andro, mifandraisa aminay mba hamaly avy hatrany. Manao izay fara herinay foana izahay mba hahazoana antoka fa faly ny mpanjifanay rehetra amin'ny fividianana anay.
Teo aloha: Dongshen malefaka volon-koditra vita amin'ny hazo vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita borosy
Manaraka: Dongshen borosy vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo avo lenta fotsy
Faritra fiharatra, Barber Shave, Mametraha makiazy borosy, Manaova borosy, borosy makiazy napetraka, Fitaovana borosy makiazy,